China Yepamusoro mhando Hydroxyethyl cellulose yecoating indasitiri Mugadziri uye Mutengesi |Longou
3. HEC iri thickener ye high concentration electrolyte.Kugona kwayo kuchengetedza mvura kwakapetwa kaviri seMC.Iine hurongwa hwakanaka hwekuyerera.
4. Yakanaka emulsion pendi inoda yakakosha pendi rheology kuti ive nechokwadi chekuenzana kwakanaka uye kubvisa nzira dzebhurashi pamusoro peakaomeswa pendi firimu.Iyo rheology ine chekuita nehukuru uye kugovera emulsion granules, asi saizi uye kugovera kune chekuita kune stabilizer system uye polymerization tekinoroji inogamuchirwa mukupolymerization.
5. Iyo polymerization inokonzerwa nekushandisa HEC sechidziviriro colloids ichabereka yunifomu emulsion quality, pasina mutsauko mune zvakasiyana-siyana emulsion: panguva iyo emulsion granule saizi inogona kudzorwa mukati mehupamhi hudiki uye granules ichashanda sechinhu chakakosha kune emulsion polymerization.
6. Iyo emulsion polymerizations iyo inowanzo shandisa HEC seyo inodzivirira colloid inosanganisira
Vinyl acetate uye mamwe macopolymerizing monomers akadai se acrylic tesin, butadiene resin para-butadiene resin ethylene nezvimwe.
7. Methyl acrylic resin uye mamwe coplymerizing monomers akadai acrylate, butadiene etc. Styrene-acrylate copolymer, styrene-butadlene copy mer, vinyl chloride-acrylate copplymer, acrylonitrile- butadiene copolmer.
Hydroxyethyl cellulose yekuputira indasitiri-1
Zita Hydroxyethyl cellulose
Type HE30MC, HE50MC, HE100MC...
Bulk density 250--550(kg/cm3)
Particle size (inopfuura 0.212mm)% ≥92
PH kukosha 5.0--9.0
Viscosity (2% mhinduro) 300--10 00000S(mPa.s, NDJ-1)
1. HEC ndiyo inonyanya kushandiswa thickener muLatex pendi.
2. Kuwedzera kukora kune Latex pende, ine basa re emulsifying dispersing, stabilizing uye kuchengetedza mvura Zvinhu zvayo zvakakosha mhedzisiro yekukora, uye yakanaka shangu colure, firimu kugadzira uye kuchengetedza kugadzikana.
3. HEC is nonionic cellulose ether inogona kushandiswa muhuwandu hwePH.Iine kuenderana kwakanaka nezvimwe zvinhu, senge pigment, ebetsero, mafirita uye munyu, kushanda kwakanaka uye kuenzanisa.Hazvisi nyore kudonhedza sagging uye kupfirira.
➢Kupararira kuri nyore uye kunyungudika mumvura inotonhorera, pasina bundu
➢Yakanakisa spatter resistance
➢Yakanakisa kugamuchirwa kwemavara uye kukura
➢Kugonabio kugadzikana.hapana viscosity kurasikirwa
Zvakapfuura: Yakanakisa emulsifying HEC yemazuva ese makemikari
Zvinotevera: High viscosity HEC inoshandiswa mukuchera peturu
Raw zvinhu HPMC LK75M 75000 mPa.s Viscosity f...
Factory Supply Cellulose ether HPMC yekuoma-musanganiswa...
Additives Hydroxyethyl cellulose yekurwadziwa kwedombo ...